NOOCYADA QUUDINTA STRAWBERRIES DAYRTA - STRAWBERRIES
Strawberries, ama strawberries - berrito oo casiir leh oo berry udgoon leh - oo ay jecel yihiin carruurta iyo dadka waaweyn.
Imaanshaha xagaaga ayaa la rajeynayaa, gaar ahaan, sababtoo ah faa iido badan oo la daalacan yahay.
Marka lagu daro dhadhanka aadka u fiican, strawberry waxay sidoo kale keentaa faa'iidooyin badan jirka jidhkiisa - waa ilaha guud ee fitamiinada, walxaha raadraaca iyo fiber.
Ma taqaanaa? Strawberries waxay leeyihiin tiro ah faa'iido leh, gaar ahaan, dhididka iyo durayo, immunomodulating, bakteeriyada. Waxay hagaajinaysaa rabitaanka cunada, waxayna caawisaa in la baabi'iyo dhagxaan kellida. Maaddaama ay ka kooban tahay folic acid waxay faa'iido u leedahay haweenka uurka leh, fitamiin C waa wax aan loo baahneyn carruurta. Intaa waxaa dheer, berry waa antioxidant iyo aphrodisiac.
Si aad u hesho miro, dhadhan fiican leh iyo mid caafimaad leh, dhirta waxay u baahan tahay ciidda bacrin ah. Si kastaba ha ahaatee, mulkiilaha kasta oo ka mid ah dacha ku faani karaa dhulka yar oo nafaqo leh. Xaaladdan, waa in la bacrimiyo. Intaa waxaa dheer, tani waa in si sax ah loo sameeyo, tan iyo Bacriminta xad dhaafka ah iyo si haboon u soo bandhigay Bacriminta waxyeeli karo berry ah - u horseedaa koritaanka kicinta, hoos u dhisto horumarinta geedka, iyo mararka qaarkood xitaa keena dhimashadiisa. In this article waxaan diiradda saari doonaa meelaha muhiimka ah quudinta strawberry dayrta.
Xilliga dayrta dusha sare ee dhoobada: goorta la bilaabayo
Inkasta oo ay u muuqato dabacsanaanta of this berry, sii kordhaya iyo daryeelidda ma noqon doonto mid xitaa xitaa bannaanka u janjeer. Waa muhiim in la ogaado in geeddi-socodkani uu ku fadhiyo "afar tiir":
daryeelka carrada (loosening and destroy of haramaha);
ka hortagga iyo daaweynta cudurada iyo cayayaanka.
Sidaa darteed, bacriminta waa qayb muhiim u ah beerista strawberries iyo si aad u hesho goosashada qani ku ah. Iska illaali nidaamkaan ma aha mid u qalma. Run ahaantii, strawberries ayaa kori kara, sidaas darteed si ay u hadlaan, iyaga u gaar ah, iyada oo aan u baahnayn faragelin gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay sii wadi doontaa oo keliya muddo wakhti aan ka badnayn laba sano. Mustaqbalka, dhulku waa la tirtiri doonaa, wax-soo-saarkana waa la dhimi doonaa. Sidaa darteed, iyada oo aan lahayn wakhti goos goos ah ee xubno raadraac ah waa lama huraan.
Strawberries waxaa lagu talinayaa in lagu quudiyo saddex jeer xilli: xilliga gu'ga, xagaaga iyo xilliga dayrta. Xilliga dayrta ayaa la soo saaraa si ay duurka berriga u dhirtaan by fruiting waxay leeyihiin waqti si ay u soo kabsadaan ka hor bilowga jiilaalka iyo awoodaan si fudud oo si fudud u noolaan karaa jiilaalka.
Tan iyo ka dib markii beergooyska, burooyinkeeda ubax waxaa la aasaasay dalagga berry, sannadka soo socda ee fruiting ku xiran tahay in bacriminta loo isticmaalay hoos strawberries dayrta. Intaa waxaa dheer, haddii berry lagu beeray oo kaliya sanadkan, quudinta dayrta waxay noqon doontaa iyada ugu horeysay. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la qaado iyada oo aan xadgudub ahayn, si aysan u waxyeeleynin mustaqbalka.
Ma taqaanaa? Bacriminta waxay keeni kartaa kororka dhalidda strawberry by 20-30%.
Bacriminta strawberries ayaa ugu fiican bisha Sebtembar. Inkasta oo ereygu uu ku xirnaan doono nooca berry ah. Qaar ka mid ah waxay ubaahan yahiin inay qaataan Oktoobar-Noofembar Si kastaba ha ahaatee, kiis kasta, bacriminta waxaa la isticmaali karaa oo kaliya dhamaadka fruiting.
Si loo ogaado nooca bacriminta loo baahan yahay for strawberries, waxaan ku talinaynaa inaad isticmaasho talooyinka qaybaha soo socda.
Habka ugu fiican ee bacriminta strawberries
Bacaha aqoonta leh, iyada oo loo marayo tijaabo iyo qalad, waxay isticmaalaan walxo kala duwan iyo isku-dhafan si dharka sare ilaa ay ka gaaraan natiijada la rabay oo dooro Bacriminta ugu fiican uguna wanaagsan ee strawberries. Qeybaha dabiiciga ah, macdanta iyo kuwa isku dhafan ayaa loo isticmaalaa Hoos waxaa ku qoran waxoogaa talooyin ah oo ku saabsan sida loo diyaariyo tan ama bacriminta iyo sida loo dabaqo sariirta beerta leh dalagyada beeraha.
Sida loo kariyo bacriminta organic
Inta badan ee quudinta ee strawberries dayactiraysaa Bacriminta organic, kaas oo, marka lagu daro quudinta dhirta laftiisa, ka caawi carrada hoostiisa si ay u wanaagsanaadaan hawada iyo hayn qoyaanka lagama maarmaanka ah. Tani waxay noqon kartaa quudin leh Doodwanaag, digada digaag, slurry, bacriminta cagaaran, ash alwaax.
Si aad u isticmaasho mullein, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso faleebo. Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagu qasi karaa qiyaas ahaan 1 litir oo leh 10 litir oo biyo ah oo loo rogay dhawr maalmood. Ka hor inta aan la isticmaalin, nus koob quraarad alwaax ah ayaa isku dhafan.
Slurry faleebo loo diyaariyey heerka 1 l ee 8 l oo biyo ah. Joogista sifeynta waxay u egtahay mid u eg labeen dhanaan.
Digaag daroogada Isticmaalka cusbada ah kuma jiri karo duruuf kasta - waxay dili doontaa dhirta. Waa mid si fiican loo qasi karo, ama daboolka. Ka dibna waxay ku shubaan biyaha inta u dhaxaysa saf.
Ash geed isdifaacaan oo kala firdhaan sariiraha iyo safafka. Isticmaal: 150 g / 1 sq. m
Sidoo kale sida bacriminta for strawberries dayrta, waxaad isticmaali kartaa digada cusub. Si kastaba ha ahaatee, waa lagama maarmaan in la buuxiyo oo keliya inta u dhaxaysa safarka si aan u gubin xididada dhirta. Xilliga jiilaalka, wuxuu ku wareegayaa oo wuxuu awoodi doonaa inuu dhulka ku quudiyo nitrogen, ka sokow mulching dheeraad ah loo baahan yahay.
Ka soo bacriminta cagaaran The afkoda iyo jarjartey caleemaha lupine, kuwaas oo la gooyaa inta u dhaxaysa saf ah, isla markiiba ka dib ubax, muujiyey natiijooyin wanaagsan. Sidoo kale isticmaal digada cagaaran ee cagaaran iyo cawska qashinka ah. Bacriminta cagaaran top ugu rusheeyey lakabka yar ee carrada ama ciid.
Waxaa jira qaacid kale oo loogu talagalay bacriminta bani-aadamka, taas oo loo isticmaalo laba jeer xilli - inta lagu jiro muddooyinka abuurka baadiyaha iyo ka dib markii fruiting. Si aad u quudiso, isticmaal maraan (1 baaldi), oo ka buuxsamey biyo diirran oo lagu muday dhowr maalmood.
Dharka ugu sareeya ee dhismaha macdanta
Mararka qaar bacriminta dabiiciga ah maaha mid aad u fudud in la qabto xilliga xagaaga. Ka dibna la hadal isticmaalka xeryaha macdanta. Waxaa loo oggol yahay sida granules rusheeyaa iyo budada potash iyo Bacriminta fosfate u dhexeeya duurka, iyo iyaga ku daadi biyo.
Xaaladda dambe, waa in aad u hoggaansameysid heerka:
ee cusbada potassium: 20 g / 10 l oo biyo ah;
loogu talagalay superphosphate: 10 g / 10 l oo biyo ah.
Waa muhiim! Waraabiyo Bacriminta macdanta waa in la sameeyaa oo keliya inta u dhaxaysa safarka. Diidmada xalalka caleenta dhirta looma oggola.
Wixii dhejisan xididka Bacriminta macdanta ee strawberries dayrta diyaarinta isku dar ah nitrophoska (2 qaado), cusbo potassium (20 g), biyaha (10 l). Isticmaalka: 1 l halkii baadiyaha.
Laba maalmood ka dib labka iyo dheddiga, ciidda ka yar duurka waa mulched leh sida balka, caleemaha, cirbadaha ama peat.
Waxa kale oo suurtogal ah in la isticmaalo bacriminta. "Kemira dayrta". Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in ay halis u tahay dhirta si loo helo daawada gudaha. Isticmaalka: 50 g / 1 sq. Waqtiga codsiga waa bilowgii Sebtembar.
Bacriminta isku dhafan
Bacriminta isku dhafan waxay sidoo kale noqon doontaa mid waxtar leh for strawberries beerta. Sidaas, dalbo isku dar ah xal mullein ah (1 l / 10 l oo biyo ah), superphosphate (2 qaado), ash alwaax (1 koob).
Hab kale oo loo 10 litir oo biyo ah ayaa kala diri kara nitroamabool (2 qaado), potassium sulfate (30 g), ash alwaax (1 koob). Xalku si fiican ayuu u kiciyaa xaalad ah xajmiga qoyaanka. Isticmaalka: 250-500 ml / 1 baadiyaha.
Sidoo kale waxaad isticmaashaa bacrimin adag oo lagu diyaariyo strawberries, oo laga iibsan karo dukaamo khaas ah.
Qaababka quudinta dayrta: sida loo bacrimiyo strawberries
Haddii aad beerto beeritaanka strawberry dayrta, markaa waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato godadka beerto. isku dar ah humus ama compost wanaagsan (3 kg / 1 sq m), chloride potassium (10 g), superphosphate (30 g).
Ka dib qaabkan, ciidda ka yar duurka waa in lagu daboolaa cawska qalalan ama mulch compost. Marka laga beerto habkan, strawberries uma baahnaan doonto bacriminta ilaa muddada dhaxan.
Xaaladda haddii aad isticmaasho xeryaha macdanta loogu talagalay bacariminta strawberries kuwaas oo horay u soo saaray strawberries, waxaad ku dari kartaa berry laba jeer ka hor jiilaalka. Marka ugu horeysa waa bilowga Sebtembar, tusaale ahaan, "Kemira Autumn", mar labaad - dhammaadka Oktoobar, ka dib jarida caleemaha. Isticmaal humateum potassium ama superphosphate.
Ka dib kasta duurka dhirta strawberry dharka waa in la si fiican u waraabiyo.
Waa muhiim! Quudinta dareerka ah waa inaan la sameynin wax ka yar toddobaadkii ugu dambeeyey ee Sebtembar. Haddii kale, xididdada geedka ma u dulqaadan karaa dhaxan.
Sida loo diyaariyo duurka strawberry jiilaalka
Marka laga soo tago dharka dayrta, waxaa muhiim ah in la fuliyo ficilada qaar si loo daryeelo strawberries, si loogu diyaariyo jiilaal nabdoon. Kuwaas waxaa ka mid ah caleemaha la gooyey iyo mulching carrada. Intaa waxaa dheer, in dayrta, waa in aadan joojin waraabinta dhirta, sababta oo ah bisha September waxaa jira cimilada kulul iyo qallalan. Iyo, dabcan, waxaa lagama maarmaan ah in la baabi'iyo cayayaanka oo dhan iyo cudurada daaweyn, haddii ay muuqanayaan on warshad, iyo sidoo kale in laga saaro xubnaha buka iyo jeermiska geedka.
Waxaa jira doodo ku saabsan haddii ay tahay in lagugula taliyo in aad ka baxdo caleemaha strawberry. Kuwa ka soo horjeeda gudniinka ayaa sheeganaya in sidan qofku farageliyo geeddi-socodka horumarinta dabiiciga ah ee miraha beeraha, taas oo dhaawici karta oo kaliya. Mid ka mid ah dooddooda waa in strawberries leh caleemo caafimaad qaba ka badbaadi kartaa jiilaalka iyada oo aan hoy, maadaama ay yihiin kuwa ka ilaalin kelyaha ka soo dhaxan. Bixiyeyaasha nidaamkaan waxay ku doodaan in gooyuhu kordhin karaan wax soosaarka sanadka soo socda.
Haddii aad go'aansato talaabadan, markaa waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida si habboon loo isticmaalo, si aanay u waxyeeleynin geedka. Ka dib markii fruiting, caleemaha strawberry waxaa la jarjaraa maqas ama shears. Waxaa fiican in la sameeyo bisha Agoosto. Iska yaree saxanka caleen. Waa muhiim inaad ka baxdo afkoda si aan si qalad ah u waxyeeleynin barta sii kordhaysa. Dhammaan anteenooyinka ayaa sidoo kale laga saarayaa raritaan.
Milkiilayaasha qaar ka mid ah sariiraha strawberry isku mar la leh manjooyin soo saaro loosening iyo hanti duurka.
Marka xigta, sariiraha aad bay u waraabin jireen iyo mulch ciidda. Dhoobo, cirbado qallalan, caleemo qallalan, iyo cows ayaa loo isticmaalaa mulch.
Waa muhiim! Ha ka takhalusin haramaha xilliga dayrta, waxa fiican inaad ka tagto nidaamkan illaa guga. Inta lagu jiro muddadan, ma aha kuwo halis ah oo loo yaqaan "strawberries", laakiin marka la soo saaro, waxaad dhaawici kartaa xididdada dhirta ee aan haysan waqti ay ku soo kabato jiilaalka.
Haddi aad isticmaasho hoyga strawberry ka hor inta aanu dhaxan xilliga qaboobaha wuxuu ku xirnaan doonaa xaaladaha cimilada ee aad ku nooshahay. Haddii aad inta badan leedahay baraf xoog leh, ka dibna barafka barafka ee berry wuxuu noqon doonaa ku filan si looga badbaado qabowga.
Iyadoo baraf yar iyo qaboobaha barafoobay, cayayaanka waa in la daboolaa. Si tan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa laamaha geedaha caleemaha, caws, caleemo qallalan, dushooda, ama qalabka gaarka ah ee daboolka ah (agrotex, spandbod, iwm.). Maaddooyinka daboolaya waa suurad wacan in la doorto cufnaanta 60 g / sq. m oo u adeegsanaya xiisadahooda. Markaad dooranaysid hoy dabiici ah, doorbidid waa in la siiyaa lapnik, kaas oo si fiican u neefsanaya oo aan u oggolaanin duurka strawberry inuu qudhmo.
Waxaa muhiim ah in la xasuusnaado in hoyga waa in la fuliyaa kaliya marka uu dhaxo ugu horeysay. Tani waxay u oggolaan doontaa in dhirta ay adkaato.
Ogaanshaha waxa Bacriminta si ay u quudiyaan strawberries iyo sida loo caawiyo iyada ka badbaadi jiilaalka, waxaad filan kartaa in haddii aad raacdo talooyinka soo socda, berry wuxuu si dhab ah kuugu mahad naqayaa for goosashada a hodan ah, dhadhan fiican leh iyo kareysa soo socda.